Ny dia manaraka - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-01 > Ny dianao manaraka
Hitanao eo amin'ny sarin'ny fonony ny mpitaingina telo mitaingina rameva mamakivaky ny efitra. Andao hiaraka amiko ary hiaina ny dia nitranga 2000 taona lasa izay. Hitanao ny lanitra feno kintana izay mihetsika eo ambonin'ireo mpitaingina taloha sy eo amboninao ankehitriny. Nino izy ireo fa hisy kintana miavaka iray hanoro azy ireo ny lalana mankany amin’i Jesosy, ilay Mpanjakan’ny Jiosy vao teraka. Na dia lavitra sy sarotra toy inona aza ny dia, dia te hahita an’i Jesosy sy hiankohoka eo anatrehany izy ireo. Rehefa tonga tany Jerosalema izy ireo, dia tsy maintsy niantehitra tamin’ny fanampiana avy any ivelany mba hahitany izay lalany. Nahazo ny valin’ny fanontaniany avy tamin’ny lohan’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna izy ireo nanao hoe: “Ary ianao, ry Betlehema Efrata, izay kely amin’ny tanànan’i Joda, avy ao aminao no hihavian’ny Tompo ao amin’ny Isiraely, izay efa nisy hatramin’ny taloha indrindra sy hatramin’ny taloha indrindra. eto »(Wed 5,1).
Ireo lehilahy hendry avy any Atsinanana dia nahita an'i Jesosy izay hitsangan'ilay kintana taty aoriana ary hivavaka tamin'i Jesosy izy ireo ary nanome azy ireo fanomezana. Amin'ny nofy, Andriamanitra dia nandidy azy ireo hiverina any amin'ny firenen-kafa amin'ny fomba hafa.
Mahatalanjona ahy foana ny mijery ny lanitra feno kintana. Ilay namorona an'izao rehetra izao dia Andriamanitra telo izay mampiseho ny tenany amintsika amin'ny alàlan'i Jesosy. Izany no antony fitsangako isan'andro mba hihaona aminy sy hivavaka aminy. Ny masoko dia mahita azy noho ny finoana azoko avy amin'Andriamanitra. Fantatro fa amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mahita azy mifanatri-tava aho, fa rehefa miverina eto an-tany izy dia afaka mahita azy toy ny azy.
Na dia ny voan-tsinapy iray ihany aza no finoako dia fantatro fa Andriamanitra Ray manome ahy an'i Jesosy. Ary faly aho fa manaiky an'io fanomezana io.
Soa ihany, tsy ho ahy ihany izany fanomezana izany fa ho an'izay rehetra mino fa i Jesoa no Mpanavotra sy Mpamonjy azy. Mamonjy ny olona rehetra amin'ny fahababoan'ny ota izy, mamonjy ny olona rehetra tsy ho faty mandrakizay, ary Izy no Mpamonjy amin'ny alàlan'ny ratra izay mametraka ny ainy sy mino azy dia sitrana.
Aiza ny fitsanganao no hitondra anao? Angamba ho any amin'ny toerana hihaonan'i Jesosy aminao! Matokia azy io, na dia mitondra anao miverina any amin'ny firenena amin'ny fomba hafa aza ianao, araka ny voalaza etsy ambony. Enga anie ny kintana mba hanokatra ny fonao amin'ny dianao manaraka. Maniry ny hanome anao fanomezana be dia be amin'ny fitiavany i Jesosy.
Mifanaraka, mpiara-dia aminao